Ujyaalo Sandesh | » विद्रोही थबाङ ! विद्रोही थबाङ ! – Ujyaalo Sandesh
विद्रोही थबाङ !
६ पुस (रोल्पा)
पुराना कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थबाङ गाउँपालिका–१ का गोरे दाइ भनिने ७० वर्षीय पूर्णबहादुर रोकामगर बिरामी परेर थलिएपछि उपचारका लागि काठमाडौंसम्म पुगे । फर्किएपछि गत उपनिर्वाचनमा थबाङका गतिविधि नियाले । ‘अहिलेको तौरतरिकाले विकास हुँदैन,’ उनले भने । अहिले गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको ठूलोगाउँमा उनको घर छ ।
तत्कालीन वडाध्यक्ष फर्कबहादुर बुढामगरको गत वर्ष निधन भएपछि उक्त पदका लागि मंसिर १४ मा उपनिर्वाचन भयो । स्थानीय निर्वाचनमा नेत्रविक्रम चन्द समूह निकटले जितेका थिए ।उपनिर्वाचनमा सत्तापक्षीय नेकपाका उम्मेदवार निर्वा्चित भएका छन् ।
उनीलगायत २२ परिवारले एकैपटक निजी सम्पत्तिलाई सामूहिक बनाएर कम्युनमा सामेल भएका थिए । श्रीमान्को रोजाइ स्वीकार गर्दै कम्युन सदस्य बनेकी पूर्णकी श्रीमती ६० वर्षीया इर्खमालाले भनिन्, ‘कम्युनिस्ट बन्दा दुस्ख पाइयो । ती दिन सम्झिन मन लाग्दैन ।’ त्यसबेला उनी राति घरमा बस्थिन् । दिउँसो जंगलमा लुक्ने गरेकी थिइन् । आफूहरूले यसरी नै तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतलाई जोगाएको उनले बताइन् । ‘प्रहरीले बन्दुकको नालले हान्दा देब्रे हात भाँच्चियो,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि, नेतालाई जोगायौं ।’ यी दम्पतीले कहिले घर त कहिले जंगल चहारे । दुई छोरी र एक छोरा हुर्काए । अहिले छोराछोरी राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । तत्कालीन माओवादीमा क्रियाशील भएर थबाङमा मारिएकी पहिलो महिला लडाकु लली रोका पूर्णकी बहिनी थिइन् । भूमिगतकालमा राजनीतिमा सक्रिय पूर्णका भाइ प्रदीप रोका पनि अहिले निष्क्रिय छन् ।
बरमन ०४८ मा र सन्तोष ०६५ मा रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभाका लागि सांसद निर्वा्चित भएका थिए । पूर्णका अनुसार थबाङमा ०१५ सालमै कम्युनिस्ट सेल कमिटी गठन गरिएको थियो । त्यसयता कम्युनिस्टहरू एकापसमा विभाजित हुँदै आएका छन् । पहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेका स्थानीय नेतारकार्यकर्ता बीचमा मोहन वैद्य र पछिल्लो पटक नेत्रविक्रम चन्द समूहको नेतृत्वमा संगठित छन् । नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय कार्यकर्ताले निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएका छन् । ‘राजनीतिक आबद्धताका कारण उतारचढाव बेहोरेको थबाङमा वैचारिकरराजनीतिक सहजतापछि विकास सम्भव छ,’ पूर्णबहादुरले सुनाए ।
थबाङले अब राज्यबाट दुस्ख पाउनु हुँदैन भन्ने पूर्णबहादुरलगायत यहाँका पुराना कार्यकर्ताको भनाइ छ । पूर्वसांसद बरमन बुढाका अनुसार थबाङ विकास खोज्ने क्रममा विद्रोही बनेको हो । विकास योजनालाई मुख्य एजेन्डा मानेर ०४८ मा तत्कालीन जनमोर्चाबाट सांसद निर्वा्चित भएपछि बरमन पहिलोपटक सिंहदरबार छिरेका थिए । उनको दल माओवादीले ०५२ फागुन १ मा सशस्त्र द्वन्द्वको घोषणा गरेपछि उनी भूमिगत हुन पुगे ।
सडक पुगेको छ भने खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रसँगको पहुँच स्थापित भएको छ । थबाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीमगरका अनुसार ठूलो राजनीतिक अन्योलपछि थबाङमा कृषि उत्पादन, गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने मुख्य योजना छन् । अहिले पनि चन्द नेतृत्वको गतिविधिको मुख्य केन्द्र थबाङमा छ । त्यसैले यो अझै विद्रोही अवस्थामै छ । ‘विकासको नतिजाबाट थबाङको वैचारिक एकता जुटाउन सकिन्छ,’ अध्यक्ष घर्तीमगरले भने, ‘स्थानीय तह त्यसमा केन्द्रित छ ।’ कान्तिपुरबाट